Intlanzi ye-Blur: Iimpawu, indlela yobomi kunye nokuzala | Ngeentlanzi
Intlanzi Yaziwa njengenye yezona ntlanzi zimbi emhlabeni. Igama layo lenzululwazi ngu Iipilisi zengqondo marcidus kwaye ifumaneka enzulwini yolwandle. Ukuthungwa kwayo kwe-gelatinous kuyenza ibe yintlanzi enqabileyo kwaye inomdla kwaye iyothusa. Kubonakala ngathi luhlobo oluthile lwesilo esivela enzulwini.
Kweli nqaku uza kuba nakho ukwazi zonke iimfihlelo zentlanzi yesusudge, ukusuka apho ihlala khona ukuya kwezona zinto zibalulekileyo. Ngaba uyafuna ukwazi ngakumbi ngaye?
2 Ukuziqhelanisa nolwandle
4 Ukutya kunye nokuziphatha
5 Izisongelo zentlanzi
Le ntlanzi ijongeka ingaqhelekanga ngokunikwa uhlobo lolusu. Ingathi yintlanzi yejeli. Ubude bayo obuqhelekileyo buhlala phakathi kwama-30 nama-38 cm, yiyo loo nto ithathwa njengentlanzi enkulu. Isikhumba esifana nejeli siyayifuna ukuze siphile kwindawo enoxinzelelo oluphezulu phantsi kolwandle. Ke ngoko, xa inyukela phezulu, ingenalo uxinzelelo lwamanzi kubunzulu, yonke i-gelatin "iyawa".
Yintlanzi engenamandla ngenxa yobuninzi bayo. Kuye kwafuneka ivumelane ngokuhamba kweminyaka kunye nokuziphendukela kolu hlobo lwendalo apho ukukhanya kwelanga kungafikeleli kwaye izondlo zinqabile. Ekuqaleni, xa kwakudlula umbono, izazinzulu ziye zathandabuza ukuba ikhona kuba ukubonakala kwayo kwakungaqhelekanga. Ngaphezulu kwentlanzi yokwenyani yayijongeka ngathi kukuqhelisela okuqhelekileyo okuvela kwimovie.
Ngokubhekisele kwi-morphology yayo, sifumana intloko enkulu esebenza ukuze ikwazi ukudada ngcono kunye nokuxinana kwayo okuphantsi kunye namaphiko amxinwa. Inkangeleko yakhe imbi xa ubona impumlo yakhe enkulu ngohlobo lwethontsi lamanzi xa liwayo. Yiyo loo nto le ntlanzi ikwaziwa njenge-drop fish. Amehlo nawo anento efana nejeli kwaye ajongeka njengamaqhosha amabini amnyama ehempe.
Ukuxinana kwabo okuphantsi kunye nobunzima bomzimba kubanceda badadise kwaye bahlale bephila kumanzi enzonzobila enzonzobila yolwandle. Ngokungafaniyo nezinye iintlanzi, ayinaso isinyi sokuqubha njenge intlanzi yegoblin. Ukudada isinyi lelinye iqela leentlanzi ezifanayo kwaye elisebenza ukuqhubeka nokudada ngaphandle kwesidingo sokwenza iinzame zokuhlala emanzini. I-smudge fish, ene-density esezantsi kakhulu kunye nolusu ngendlela ye-jelly, ayifuni eli lungu ukuze liqhubeke nokuhlala elwandle.
Iintlanzi ezihlala kumanzi enzonzobila enkulu kufuneka zimelane noxinzelelo olukhulu emanzini. I-smudge fish ivelise uhlobo oluthile lolusu oluzivumelanisa nazo zonke izinto eziphazamisayo ezikhoyo kwezi ndawo. Ilanga alifikeleli okanye lifike kancinci, ke lo mhlaba ngumzabalazo oqhubekayo wokuphila. I-smudge fish iyakwazi ukuhlala kwezi zinzulu ngenxa yoluhlobo lolusu kunye nokuxinana okuphantsi.
Ithathwa njengeyona ntlanzi imbi emhlabeni ukusukela, xa inyukela phezulu, ijeli emzimbeni wayo ithamba kwaye ijongeka ngathi ikukukhubazeka okufana kakhulu nokuma komhlaba ngaphandle kwentlanzi eqhelekileyo kwiplanethi yethu. Ngokubhekisele kumaqondo obushushu, ikhululekile ngakumbi kwiindawo apho ikwi-2 kunye ne-9 degrees.
Uluhlu lwe-blotfish lusemanzini anzulu phakathi konxweme lwe-Australia kunye neTasmania. Kukule mimandla apho ubuninzi bayo bukhulu, nangona kunzima kakhulu ukuyibona. Kuye kwabonwa kudada emanzini anzulu e-New Zealand.
Ukuba yintlanzi ehlala ezinzulwini, kunzima kakhulu ukuba sinokubona umntu engenazo izinto ezaneleyo zokungena elwandle. Singayifumana kubunzulu phakathi kwe-900 kunye ne-1200 yeemitha. Ukuba ukhe wantywila, uyabona ukuba uxinzelelo lwamanzi lonyuka kakhulu njengoko sizika. Khawufane ucinge uxinzelelo olunokuba kwiimitha ezili-1200.
Ukutya kunye nokuziphatha
Ukutya kwayo kwahluka nangona iimeko zifunyenwe. Unokwazi ukutya kangangoko unako njengoko ukutya kunqabile kule mimandla yolwandle. Nawuphi na umzimba odadayo kufutshane nawe okanye onqunyanyisiweyo emanzini usebenza njengokutya. I-urchins zaselwandle, ubuninzi obukhulu kunye neentlobo zeemollusks kunye nee-crustaceans ziyinxalenye yokutya okwahlukeneyo.
Nangona engenawo amazinyo asetyenziselwa ukugaya ukutya ngaphambi kokukufaka esiswini, akanangxaki ekukugayeni. Inkqubo yokwetyisa iphuhlisiwe kwaye inamandla amakhulu okwenza ukutya konke ukutya okutyiweyo.
Kucingelwa ukuba ngenxa yokuba ezi ntlanzi zihlala kwindawo ezinzulu kakhulu azoyikiswa mntu. Nangona kunjalo, basengozini ngenxa yesandla somntu. Inkqubo yokuloba iyakwazi ukufikelela kubunzulu obunjalo kwaye, ngamanye amaxesha, iisampulu ze-blotfish zibanjwa ngengozi. Ukongeza, ayisiyiyo kuphela imizekelo ethathiweyo, kodwa indawo yokuhlala apho iyatshatyalaliswa.
Ngamanye amaxesha imisinga ebangelwe ngala maphenyane okuloba iyayihambisa iye kubunzulu obonakalisa umzimba wayo nokunciphisa izinga lokusinda.
Ngaphandle kwendlela ebukeka imbi ngayo, ayisiyonto imbi xa iphantsi kolwandle. Oku kungenxa yotshintsho kuxinzelelo lwamanzi. Njengoko inoxinzelelo oluncinci xa inyuka iye ngaphezulu, ithatha ukubonakala kwe-gelatin kunye nokubonakala okungalunganga.
Ayisebenzi konke konke. Ezi ntlanzi ziyadika. Ngokungabinanto ingako bayenzayo, indaleko ibakhokelele ekwazini ukonga amandla.
Kuba ayinathambo namazinyo, ayikwazi ukuluma.
Ayityiwa. Njengokuba ifikelela kumphezulu iya isiba ngakumbi kwaye iyanda ngakumbi de ibe iyafa.
Akanaso isinyi sokuqubha ngenxa yoxinzelelo lwamanzi kwindawo ahlala kuyo. Uyakwazi ukudada kwaye uqubha ngaphandle kwawo.
Ngolu lwazi uya kuba nakho ukufunda ngakumbi ngale ntlanzi ikhethekileyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Intlanzi » Fiphaza intlanzi
UJose Maria Ruíz sitsho
Ekuqaleni kwenqaku uthi unebhadi lokuqubha kwaye xa usiya phambili uthi akanako, sishiyeke njani no-SR.
Phendula kuJosé María Ruíz
IsiJamani sasePortillo sitsho
Ulungile uJosé María. Ayinayo isinyi sokuqubha, yinto engalunganga. Ngombulelo kulusu lwayo lwe-gelatinous olukwaziyo ukumelana noxinzelelo lolwandle. Kulo lonke inqaku likhankanywe ngaphezu kwesinye ukuba alinalo. Enkosi kakhulu ngokundixelela, sele ilungisiwe